သနပ်ခါးမေ: My little DIYs
By **~ မြတ်ကြည်~** 8:31 AM DIY, မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
မြတ်ကြည်က ပီစီပါစာလေးတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ သဘောကျတယ်။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ သူတွေ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးရင် ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတာလေး ပေးတတ်တယ်။ အဖေက တခါတလေ ဆုံးမတယ်။ ကိုယ်က အပင်ပန်း ခံလုပ်ပြီးမှ၊ သူများ တန်ဖိုးမထားရင် ကိုယ်လုပ်တာ အလကားဖြစ်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် မြတ်ကြည်ပေးတဲ့ သူတွေက တန်ဖိုးထားကြတဲ့ သူတွေချည်းပါပဲ။
ဒီပို့စ်မှာ မြတ်ကြည် လုပ်ထားတာလေးတွေကို ကြွားပါမယ်။ :)
အဒေါ် အတွက် ဖုန်းအိတ်
ခရစ်စတယ်လ် အစေ့လေးတွေကို ဗိုလ်ချုပ်ဈေးက ဝယ်ပါတယ်။ ကြယ်သီး ရောင်းတဲ့ အတန်းမှာရှိတယ်။ သူက ဒီတိုင်း ခရစ်စတယ်လ်ကြီးဆို ကြားမှာ ဟာပေါက်လေးတွေရှိတော့၊ ဘောစေ့လေးတွေနဲ့ တွဲထိုးတယ်။ လုပ်နည်း ထိုးပြချင်ပေမယ့် ဒီမှာ ဘယ်မှာ ဝယ်ရမှန်း မသိဖြစ်နေလို့။
ဒါကတော့ သူငယ်ချင်း အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်
ကျောင်းမှာ အလုပ်သင်ဆင်းတဲ့ အခါ ဖုန်းအိတ်လေးတွေ ခါးမှာချိတ်ပြီး အလှပြကြတာပေါ့။
ပြီးတော့ စက္ကူခေါက်တာ ဝါသနာပါတယ်။ စက္ကူနဲ့ အရုပ်လုပ်တာ။ အရင်က ကွန်ပြူတာမှာ ဒေါင်း၊ ပရင့်ထုတ်၊ လိုက်လုပ်ကြည့်။ အရမ်း လက်ဝင်တာ ကျတော့ မဖြစ်ထွန်းတာ များတယ်။ :D
နှင်းဆီပန်း >> (လုပ်နည်း)
ချစ်ချစ်ကို လက်ဆောင်ပေးလို့ရတာပေါ့။ :)
သိုးမွေးကတော့ မာဖလာ တစ်မျိုးပဲ ထိုးတတ်တယ်။ :P တည့်တည့်ဆိုတော့ လွယ်တယ်။
အစောကမှ ပြီးတဲ့ မာဖလာလေးပါ။ အပေါ်ထိုး၊ အောက်ထိုး ခြားသွားတာ။
နောက်ပို့စ် စာစီနေတုန်းမို့လို့ အချိန်သိပ်မခြားအောင် ဒါလေး ကောက်တင်လိုက်တာပါ။ ဘာပဲပြောပြော နောက်လဆို မြတ်ကြည် ဘလော့လေး ၁ နှစ်ပြည့်ပြီ။ အမှတ်တရ ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာ။ အကြံလေးတွေရှိရင် ပေးသွားပါဦးနော်။ :)
DIY, မြတ်ကြည်၏ စုံစီနဖာ
AH June 15, 2012 at 9:28 AM
ဟန်းမိတ်တွေ သဘောကျသဗျား.... ၁ နှစ်ပြည့်တော့မယ့် ဘလော့ဂ်မှသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ် ခင်ဗျာ။...
Snow May June 15, 2012 at 1:34 PM
ချစ်စရာလေးတွေ.။ လုပ်တတ်ချင်ပေမယ့်.. ဘာမှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်မလုပ်တတ်ဘူး :)
မဒမ်ကိုး June 15, 2012 at 6:11 PM
ပုတီးစေ့ လေးတွေ ထိုးတတ်ချင်တယ် ... :)
နွေလ June 15, 2012 at 8:13 PM
ကျွန်တော်လည်း hang made တွေကို
အဲ့ဒီလို handmade လက်ဆောင်တွေတော့
တစ်နှစ်ပြည့်မှာ ဘာအစီအစဉ်တွေ ရှိသေးသတုန်း
Candy June 15, 2012 at 9:49 PM
ကန်ဒီလည်း Handmade တွေ သဘောကျတယ်.. နှင်းဆီပန်းလေး လုပ်ကြည့်ဦးမယ်
Cherry Wine June 15, 2012 at 9:49 PM
မြတ်ကြည်စာတွေကို အမြဲဖတ်ဖြစ်တယ် ။ ကွန်မန့်သာမရေးပေးဖြစ်တာ ။ ဒုတိယပုံ အိတ်လေးကို သဘောကျတယ် ထိုးနည်းအဆင်ပြေရင် တင်ပေးနော်။
မာဖလာကရော တစ်ချောင်းထိုးနဲ့ထိုးတာလား နှစ်ချောင်းထိုးလား .. တစ်ချောင်းထိုးဆိုရင် အစပိုင်းလောက်ထိုးနည်းပြောပြပေးပါလား လိုက်ထိုးကြည့်ချင်လို့ :)
မြတ်ကြည် June 15, 2012 at 10:14 PM
မာဖလာက ၂ချောင်းထိုး ချယ်ရီ။ ဖုန်းအိတ်က ပထမ အပြားလိုက် အရှည် ထိုးပြီးမှ နှစ်ဘက်ကို ပြန်သီတွယ်တာ။ သီရင်းနဲ့ ဘယ်နေရာ အရောင်ထည့်မလဲ ဆိုတာ မှန်းပြီး ထည့်သွားတယ်။ အစေ့ရှာကြည့်ပါဦးမယ်။ ရရင် လုပ်နည်း တင်ပေးပါမယ်နော်။ :)
မမရေ.. ကျေးကျေးပါနော်. သဲ လဲ ကြိုးစားထိုးနေတယ်.။ အရင်က သယ်ရင်းတွေကိုလက်ဆောင်ပေးရင် ဈေးမှာဝယ်တာလေ။ ခုတလော ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ ပုစိပေါက်စ hand made လေးတွေ နဲ့ ပေးချင်လို့ .. မမအတွက်လဲ လက်ဆောင်ထိုးပေးမယ်နော်.. တာ့တာ ပါ.
သဲ အမြဲလာလည်ပါတယ်.. :)
စံပယ်ချို June 16, 2012 at 8:19 AM
ငယ်ငယ်လေးကတဲက မျက်မှန်တပ်ရတော့ အဆင်မပြေဘူး
khin yamone June 16, 2012 at 11:12 AM
စာတွေကြိုးစားနေ အလုပ်တွေရှုပ်နေတဲ့ကြားက ချစ်စရာဘလော့လေးတစ်ခုကို အကြောင်းအရာမျိုးစုံနဲ့ ဝေဝေဆာဆာလေး ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်တာကို ချီးကျူးပါတယ်..
ပညာရေးမှာလည်း ရည်မှန်းထားတာထက်ပိုပြီး အောင်မြင်ပါစေ...
camomile June 16, 2012 at 1:29 PM
နှစ်ချောင်းထိုး ထိုးတတ်ချင်လိုက်တာ...း(
san htun June 16, 2012 at 3:24 PM
ဖုန်းအိတ်လေးနဲ့မာဖာလာလေး သဘောကျတယ်ဗျို့ ..Hand Made တွေ သိပ်သဘောကျ..တစ်နှစ်ပြည့်မှသည် စာတွေအများကြီး ရေးနိုင်ပါစေ..
ဖြိုးဇာနည် June 17, 2012 at 9:55 AM
အဆင်မပြေဘူး အစကထဲကကို ခက်နေတာ ဟူးးးးးးး
ကိုရင် June 17, 2012 at 6:26 PM
သူလာဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ မဒမ့်ကို မာဖလာထိုးခိုင်းရမယ်..